Umjaho WeCurragh - IntoKildare
Umdlandla wase-Ireland wokujaha amahhashi uyinsumansumane futhi ukuwuthola eCurragh akusoze kwalibaleka. Ochwepheshe bemijaho yamahhashi bangabantu abanothando futhi abanothando lwehhashi eliphelele. IHorseracing isegazini labo. Woza ujabulele usuku emijahweni futhi ujabulele ezemidlalo esezingeni lomhlaba endaweni enhle emathafeni aseCurragh lapho ukugijima kwamahhashi kanye namahhashi bekulokhu kuyingxenye yokuphila kwansuku zonke amakhulu eminyaka. Indawo enkulu entsha yaseCurragh ivulwe ngo-2019 futhi iyisikhungo esisezingeni lomhlaba esinamazinga entofontofo futhi nesipiliyoni samakhasimende ngokufana kakhulu nehhotela lesigaba esiphakeme kunendawo yezemidlalo. Umjaho wamahhashi ungowenhlalo kakhulu kwezemidlalo nobungani bomndeni, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ziya mahhala. Vakashela iwebhusayithi yeCurragh Racecourse namuhla bese ubhuka usuku lwakho olulandelayo emijahweni. www.currai.ie
I-Curragh Racecourse nezindawo zokuqeqesha
ICurragh Racecourse ibambe iqhaza elikhulu empilweni yansuku zonke kumahektha angama-2,000 1,000 ahlukile aseCurragh Plains amakhulu eminyaka. Amathafa aseCurragh ahlala emahhashini omjaho angu-5 1866 lapho kuqeqeshwa khona izitebela ezizungeze izinkundla ezintathu zokuqeqeshwa ezihlukene. ICurragh iyikhaya lemijaho eyisihlanu ebaluleke kunazo zonke yase-Ireland minyaka yonke eyaziwa ngokuhlanganyela njengamaClassics. I-Irish Derby, eqhutshwa okokuqala ngo-XNUMX, iyona egqamisa isizini yomjaho iCurragh futhi iqhutshwa ngoMgqibelo wokugcina ngoJuni unyaka nonyaka. Umcimbi omkhulu kwezenhlalo nakwezemidlalo, i-Irish Derby wusuku okungafanele luphuthelwe ngalo. ICurragh ibamba imihlangano kusuka ngoMashi kuya ku-Okthoba unyaka nonyaka. Ngeminye imininingwane, hlola iwebhusayithi yeCurragh.
Ngemuva Kwama-Scenes Tours
ICurragh Racecourse iyakujabulela ukumemezela ukuthi kungekudala bazothatha ukubhuka ku-inthanethi ngemuva kokuvakasha kwezigcawu ze-grandstand nezindawo ezivalekile. Uzokwazi ukuvakashela izindawo ezingaphandle kwemingcele yomphakathi ngezinsuku zomjaho, njengamagumbi okushintshela ama-jockeys, igumbi lesisindo kanye nebhalkhoni ephezulu ye-VIP ebheke amathafa aseCurragh. Ngeminye imininingwane sicela uvakashele: Umjaho weCurragh - Ngemuva Kwama-Tours Wezigcawu
Umjaho wamahhashi nehhashi elihlanzwe kahle bekuyingxenye esemqoka yamatshe agqamile emathafeni aseCurragh amakhulu eminyaka futhi imvelaphi yamagama ezindawo ikhombisa ukuthi iCurragh kwakuyindawo ekhethiwe yokujaha amahhashi ebuyela emuva ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Amathafa aseCurragh anobubanzi nokujula komlando olingana nanoma yikuphi e-Ireland. Kungani ungayi kozibonela lo mlando? Noma ngabe intshisekelo yakho ingukuvubukulwa kwezimbali noma ezempi, ezolimo, ezombusazwe kanye nomlando wezemidlalo, iCraragh Plains inendaba ethokozisayo futhi nohambo kulezi zindaba luchaza ukuthi indlela yokuphila nomsebenzi eCurragh ihlale kanjani iphila kusukela emlandweni wokuqala owaziwa kahle kuze kube namuhla.
Ukuzidela Nemisebenzi, I-Equestrian Kildare, Newbridge
Newbridge, Isifunda iKildare, R56 RR67, Ireland.